Maitiro Ekuisa Paint Dziviriro Firimu?-Company News-NINGBO CHEM-PLUS & JW FILM
Maitiro ekuisa Paint Dziviriro Firimu?
Sezvo pendi yemotokari pamusoro, pf ndiwo mutsara wekupedzisira wekudzivirira kubva mukukwenya uye ngura. Mhedzisiro yacho iri pachena iri nani pane wakisi, plating, uye zvimwe pendi pamusoro pekuchengetedza zvigadzirwa. Varidzi vemotokari vanoshuva simba rekudzivirira remajasi emotokari asingaoneki, asi hapana vakawanda vanonyatsoziva. ivo tyaira motokari kuchitoro uye uende mushure mekusarudza chisingaoneki chipfeko chemotokari. motokari.
Ndeapi maitiro ekuisa pf pamotokari? Sei ari mazuva maviri kana matatu? Ngatitarisei kune zvakadzama maitiro ekuisa izvozvo.
1. Kugadzirira kwekuvaka
Gadzirira maturusi anodiwa pakutora firimu: akasiyana mascrapers, zvinwiwa zvekuisa, zvekupukuta mota, mvura yakachena, magaba ekupfapfaidza, uye mapanga ekushandisa; tarisa nzvimbo yehutsanana yenzvimbo yekuvaka, ita kurapwa kwekudzikisa guruva mumusangano, uye tanga kuvaka mushure mekupedzwa.
2. Kuchenesa motokari
Geza mota usati wapfeka pf, kunyanya micheto uye makona enzvimbo yakapendwa. Ita shuwa kuti hapana kusvibiswa kwemafuta panzvimbo yakapendwa, kuti irege kukanganisa maitiro ekuvaka.
3. Tarisa motokari
Tarisa kuti pane zvikwangwara papendi yemota inoda kutorwa mifananidzo here, pendi yemota iri muchimiro chakanaka here, uye kana paine zvikamu zvisina kukodzera kuvakwa. Tora mafoto uye marekodhi evhidhiyo uye simbisa nemutengi kudzivirira kusanzwisisana kusingakoshi.
4. Kucheka firimu
Pane nzira mbiri dzekucheka zvipfeko zvemotokari zvisingaoneki maererano nenzvimbo dzakasiyana pamuviri. Imwe ndeyekucheka muchina. Muchina wekucheka firimu une shanduro yemotokari. Mushure mekuisa iyo data, iyo firimu inogona kuiswa zvakananga pasina disassembly yekushongedza kwependi yemotokari. Usanetseka nekukwenya pendi;
Imwe yacho ifirimu yakagadzirwa nemaoko, kupera kwepende kunoda kuparadzaniswa zvachose, zviri nyore kukwenya pamusoro pepende paunenge uchicheka firimu, uye firimu remaoko rinoda kusimbisa kukwanisa kwemufirimu wefirimu.
Iyo yekumisikidza mvura inodururwa zvakaenzana pane isingaonekwe chipfeko chemota glue layer uye pendi pendi, uye chipfeko chemota chinosungirirwa kune pendi pendi zvinoenderana nenzvimbo yakachekwa. Shandisa scraper kutyaira mvura kubva panzvimbo yepakati kusvika kumativi ose. Simbisa kuti hapana dambudziko nenzvimbo yakaraswa panguva yekutyaira kwemvura. Mushure mekunge mvura yabviswa, shandisa tauro kuomesa mvura yakawandisa pamusoro pemota isingaonekwe, uye tarisa kana kuiswa kwacho kunokodzera, zvikasadaro inoda kutumirwa zvakare.
6. Tora kumucheto uye uputire kona
Isa bhachi remota rakachengetwa risingaonekwe mumusono wepadivi, uye shandisa pfuti yekubikira kupisa uye kubika kugadzira iyo. pf zvakatsvinda uye zvakatsvinda.
7. Kupedza kuongorora
Nyatsoongorora mamiriro ekuvaka, uye kupedza basa mushure mekuchenesa membrane pamusoro.
Vhiki imwe mushure mekupedzwa kwekuvaka, iwe unofanirwa kudzivisa kugeza motokari nemvura, uye kudzokera kuchitoro kuti uongorore zvakare mukati memazuva gumi. Kana pane chimwe chiitiko chakadai se warping, mhepo inoputika, nezvimwewo, inofanira kugadziriswa nenguva.